Xasan Cali Kheyre oo ka digay doorasho aan heshiis lagu aheyn inay dalka ka dhacdo | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Xasan Cali Kheyre oo ka digay doorasho aan heshiis lagu aheyn inay...
Xasan Cali Kheyre oo ka digay doorasho aan heshiis lagu aheyn inay dalka ka dhacdo
Muqdisho (Halqaran.com) – Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali kheyre kana mid ah Midowga Musharraxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in doorasho aan lagu aheyn hehsiis ay sababi karto inay ka dhashaan dhibaatooyin kala duwan.
Kheyre ayaa sheegay in markii uu ahaa Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu u cadeeyay Ummadda Soomaaliya inay muhiim tahay qabashada doorasho heshiis lagu yahay oo lawada ogol yahay, taasina ay tahaya lama huraan.
“Waxaan u dhow nahay haddii aan la qaban doorasho waddar ogol ku dhicin inay wax badan naga halaabaan, waxaana dhici karta inay dhalato dowlad aan la isla ogoleyn, hadii la isku dayo in dalka laga qabto doorasho aan la isla ogoleyn, waxaa ka dhalan karta, wixii ka dhacay, Beledweyne Gobolka Gedo iyo dagaalkii ka dhacay degmada Kaaraan‘‘ ayuu yiri RW Xasan Cali Kheyre.
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa hadalkaan uu ka jeediyay Barnaamijka looga hadlayay xilliga kala guurka iyo xaalada siyaasadeed ee dalka ayaa ahaa mid dad badan ay ka sugayeen in uu ku dhaliilo Dowladda Madaxweyne Farmaajo uu uu mar ka tirsanaa, hayeeshee uu ka gaabsaday.
Doorasho aan heshiis lagu aheyn